Xubnaha Shabaab ah oo howlgal lagu dilay - Awdinle Online
Xubnaha Shabaab ah oo howlgal lagu dilay
Cutubyo ka tirsan ciidanka Xoogga Dalka oo howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyay Tuulooyin Hoostaga Bariire.
Ciidammadan ayaa ka ruqaansaday deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeelaha Hoose, iyagoo xooraan ku helay in Tuulooyinka Balow iyo Nuunaay ay soo galeen xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Ciidanka xoogga ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay labo ruux oo ka tirsan Shabaab.
Labada labada ruux ayuu Taliye Axmed waxa uu Magacyadooda ku kala sheegay Ciise tima weyne oo ku magac dheer Abuu dheere waxa uuna Al-Shabaab u qaabilsanaa Xilka Abaandullaha Howlgalinta Al-Shabaab iyo Qooreey oo Al-shabaab u qaabilsanaa zakawaadka gobolka.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Al-Shabaab oo looga hadlay warkaan kasoo baxay Ciidanka ee ku aadan in ay dileen Saraakiil ka tirsan Shabaab.
Previous articleDad ka ganacssnayay Carruurta oo Gacanta lagu dhigay
Next articleAxmed Madoobe oo sheegay in aan weli xal loo helin Arrinta Gedo